ကန်တီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြင်သစ် ဘောလုံးသမားတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:ပြင်သစ် ဘောလုံးသမား
အန် ဂိုလို ကန်တီ
၂၀၁၈ခုတွင် ပြင်သစ် ၌ ကန်တီ လေ့ကျင့်နေစဉ်
(1991-03-29) ၂၉ မတ်၊ ၁၉၉၁ (အသက် ၃၁)
လက်စတာ စီးတီး 37 (1)
ချဲလ်ဆီး 129 (9)
ပြင်သစ် 41 (1)
အနိုင်ရသူ 2018 Russia
ပြည်တွင်းလိဂ်အတွက်သာ ရေတွက်ပြီး 05:06, 21 September 2020 (UTC)အထိ ဖြစ်သည်။
‡ 23:14, 8 September 2020 (UTC) အထိ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပွဲနှင့် သွင်းဂိုးများ
ကန်တီ (၁၉၉၁ မတ် ၂၉ တွင်မွေးဖွားသည်) ပြင်သစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ချဲလ်ဆီး နှင့်ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ဗဟိုကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ် ကစားသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သူသည် ပေါင် ၅.၆ သန်းတန်ကြေးဖြင့် လက်စတာ စီးတီး သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး အသင်း၏ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ဆု ရရှိခဲ့သည့် အရေးပါသောအသင်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် လက်စတာ စီးတီး၏တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် ၊၊ နောက်နှစ်တွင် ပေါင် ၃၂ သန်းဖြင့် ချဲလ်ဆီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ထိုနှစ်တွင်ပင် အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဆုဖလားကို အနိုင်ရခဲ့သည်။ သူသည် အဲရစ်ကန်တိုနာကဲ့သို့ ၁၉၉၂ နှင့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တို့တွင် ကလပ်အသင်း ၂ခုနှင့် အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဆုဖလား ၂ခု ရရှိခဲ့သည့် ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် PFA ကစားသမားများ၏တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားနှင့် FWA ၏တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
↑ "Décret du 31 décembre 2018 portant promotion et nomination" (in French) (1 January 2019). Journal Officiel de la République Française 2019 (0001). PRER1835394D. Retrieved on 24 August 2019.
↑ FIFA World Cup Russia 2018: List of players: France (PDF)။ FIFA (15 July 2018)။ 19 June 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ N'Golo Kante။ Chelsea F.C.။5October 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကန်တီ&oldid=697221" မှ ရယူရန်